တရုတ်အစိုးရ ဇာတိပြလာပြီ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » တရုတ်အစိုးရ ဇာတိပြလာပြီ	15
ကိုရင်မောင် says: ခုလိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးဘဲ ကိုဘုန်းကျော်ရေ
ကျနော်ကိုယ်တိုင်တရုတ်သွေးပါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့စိတ်သဘောထားလုံးဝမကြိုက်ပါ…
သူနိုင်ငံမှာလဲ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိ အုပ်ချုပ်သူအပိုင်းနဲ့ပြည်သူ
တဖြေးဖြေးကွာဟ လာနေပါပြီ..ဒီလိုပုံစံအတိုင်းစနစ်မပြောင်းဘဲ သွားနေလို့ကတော့
တချိန်မှာ အဏာမက်မောတဲ့အဏာရှင်လူတစု ပေါင်းစည်းမိခဲ့ယင်
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဟုတ်ပါတယ်ကိုဘုန်းကျော်ရေ
( ကလားမြန်မာ အရေးခင်းကို လုပ်ကြံမှု့လို့ ထင်သာမြင်သာရှိလာရင်တော့
ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးဟာ လူတစ်စုရဲ့ လက်ထဲကနေထိမ်းကြောင်းတာ
ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျုပ်တို့ နားလည်ရမယ် ) လို့
water-melon says: ဒါကြောင့် တလုပ်မတွေကို
ဟယ် နာလည်း တလုပ်ဘဲ
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: ဟဲ့တောင်မညဉ်းအေဗာတာကြည့်ရတာနာတောင်အာဘွားပေးချင်လာပြီ…
ဖိုးထောင် says: ကိုဘုန်းကျော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ့်အကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးပါဗျာ
သားဦး၊မြေးဦး says: ဒီတခါလဲ ကော်ပီ၊ပေ့စ်ဘဲဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9932
မောင်ပေ says: သည်ပို့ စ်အတွက်တော့ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပါရစေဗျို့ ။
ရွာစားကျော် says: တရုတ်လူမျိူးတွေကို ဆန့် ကျင်ဖို့ ဒီစာဖြန့် တာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုသာဆန့် ကျင်တာဖြစ်တယ်။
ကိုဘုန်းကျော် သံမှန်လေးနဲ့ အမြင်ကောင်းလေးတွေ တင်ပြတတ်ပါတယ်..
may flowers says: မှန်လိုက်တာကိုဘုန်းကျော်ရယ်………သွေးထွက်အောင်မှန်တယ်။ တယုတ်တွေက မြန်မာပြည်နဲ့
မြန်မာပြည်သားတွေကို ဂုတ်သွေးစုပ်ဖို့လောက်ကလွဲပြီး ဘယ်တုန်းကမှစေတနာမှန်ရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။
ရဲစည် says: အားပေးသွားပါတယ်ဗျို့
သတိချပ်စရာပါဘဲ….. ကြားဖူးသလောက်ပြောရရင် တရုတ်လူမျိုးတွေကလည်း မြန်မာပြည်ကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူးဗျို့( မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်နှင့် လက်ရှိဆက်စပ် ကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်နေသူ မပါ) တရုတ်ပြည်ရဲ့ အဓိက မြို့ကြီးတွေမှာ နေထိုင်သူ ပညာတတ် ဥစ္စာဓနပေါသူ အသိုင်းအ၀ိုင်းက သူတို့ရဲ့ အဓိက Targetကို အမေရိကနဲ့ ဥရောပကို ထားသဗျ တချိန်က ဆန်တစ်ကျင်ကို တမျိုးလုံး တဆွေလုံး စုပေါင်းစားခဲ့ရတဲ့ ခေတ်ကို သိမှီတဲ့ တရုတ်ဘိုးဘေးတွေက သူတို့မြေးမြစ်တွေကို ခုချိန်ခါမှာ သူတို့လို မဖြစ်စေချင်ကြဘူး ဒီတော့ အားလုံးက ပန်းသီးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ အီတလီဒီဇိုင်းတွေ ပြင်သစ်မွှေးရနံ့တွေကို ပျော်ဝင်စေချင်ကြတယ်။ တရုတ်အစိုးရ ထိပ်တန်းပိုင်းတွေကလဲ မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် သိပ်ခေါင်းစားမခံဘူး သူတို့ပါတီဝင် ယွဲနန်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တင်ပြလာရင် ကောင်းမယ်ထင်လို့ကတော့ အကုန်လွှတ်ပေးသဗျ… စီချွမ်ငလျင် ဖြစ်တော့ တရုတ်အစိုးရက ၀န်ကြီးချုပ်ကိုမေးတယ် အဲဒီဒေသက စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ စက်မှုလယ်ယာ လာတစ်ခုမှ အဆင်မပြေဘူး တနေ့တနေ့ ကချင်ပြည်နယ် အစွန်းပိုင်းက ခိုးဝင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က ဆီ၊ဆန်၊ဆား၊ကြက်သွန်တွေနဲ့ ရပ်တည်နေရတာ။ ဆိုတော့ ၀န်ကြီးချုပ်က အဲဒေသက လူတွေကို အောက်ဘက်ပိုင်း ယွဲယ်နန်ပြည်နယ်ဘက် ရွှေ့ခိုင်းပီး ပြည်မကြီးက ဘဏ်တွေကတဆင့် ချေးငွေတွေပေး အလုပ်အကိုင်တွေ ထူထောင်ပေးနဲ့ အဆင်ပြေလာကြသဗျ။ ခုထက်ထိ တရုတ်ပြည်မကြီး အတွင်းပိုင်းက မြန်မာပြည်ဆို ကောင်းကောင်း မသိကြဘူး မြေပုံထဲမှာ ထောက်ပြရင်တောင် မသဲကွဲဘူး
ဘာပြောချင်သလဲဆိုတော့ လက်ရှိ မြန်မာနဲ့ တရုတ် ဆက်ဆံရေးဟာ အစိုးရပိုင်း အဆင့်မှာတောင် ယွဲနန်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကို မကျော်နိူင်သေးဘူး နောက်ပီး အစိုးရပိုင်းလူကြီး ၀န်ပျင်းတွေလောက်ကလဲ ကိုဘာမှမတတ် မသိတော့ ပွဲစားတွေလောက်နဲ့ဘဲ အလုပ်လုပ်နေရတာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီမံကိန်းအဆင့် ဆိုတာတွေက အာဖရိကကို ရောင်းနေတဲ့ ဘယာဇီယာ လောက်တောင် ကွာလတီမရှိဘူး ဒါကလဲ ပွဲစားတွေနဲ့ လူကြီးပျင်းတွေကြောင့် ဒီတော့ဗျာ မြန်မာနဲ့ပတ်သတ်ပီး တရုတ်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒကို လောလောဆယ်မှာတော့ မကြောက်သေးကြောင်း………………………..
တရုတ်နဲ့ မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို အလေးထားမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ပြည်တွင်းက ပွဲစားတွေနဲ့(နိူင်ငံရေး၊စီးပွားရေး) နယ်နမိတ်ကပ်နေတဲ့
ဒေသကြီးက လူတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် နောင် ဆယ်နှစ်လောက် အထိ အာမခံနိူင်ကြောင်း……( ကျနော့် အမြင်လေးပါ)
mona smile says: ဟုတ်တယ်..မိုနာ တို့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ “မဟုတ် တရုပ် ” နဲ့” ကလေး ကုလား”ဖြစ်နေတယ်…
ဘဲဥ says: တရုတ်အစိုးရကို လုံးဝ (လုံးဝ) ကန့်ကွက်ဒယ်
ရှုပ်ချဒယ်၊ ၆ညင်ကတ်ဒယ်၊ ဒါဗြဲ
kyeemite says: ကိုဘုန်းကျော်ရေ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 669
laypai says: ကချင်ပြည်နယ် အရေး၊ ရခိုင် အရေး နဲ့ တာဝါတိုင် ဖောက်ခွဲ ခံရ ပြီး ရန်ကုန် အပါ အ၀င် မြို့ နယ် အနှံ့ အပြား လျှပ်စစ် မီး ပြတ်တောက်မှု တွေ မှာ တရုတ် အစိုးရ အနေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် ထားရှိ တဲ့ သဘောထား အမှန်ကို ဖွင့် ချ ပြနိုင် ခဲ့ တယ်။
ဟို အရင် ထဲ က တရုတ် အစိုးရ ဟာ မြန်မာ ပြည် မရိုးသားဘူး ဆို တာကို သိသိ ကြီးနဲ့ ကောင်း ပါတယ် ဆို တဲ့ စစ်အစိုးရ ပါ ငြင်းချက် ထုတ် မရတော့ အောင် အဲဒီ အရေးအခင်း တွေ က သက်သေ ပြခဲ့ တာပါ။
ba gyi says: ကဖုန်းကျော်ရေ၊မှန်ကန်သော ပို့စ်ပါဗျား။
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊မျက်စေ့ပွင့်၊နားပွင့် တိုးတက်မှာတင်မက၊ သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအား လုံးအဲလိုဖြစ်သွားမှာကိုအရမ်းကြာက်တဲ့နေရာမှာ-
(2)သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အနောက်အုပ်စုမဟာမိတ်များဝိုင်းလာခြင်းအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာလျှင် သူပြည်သူများကပါ၊သူတို့ရဲ့အာဏာချုပ်ကိုင်မှုအပေါ်ထပ်မံအုံကြွမှာကိုကြောက်ရွှံ့ခြင်း။
(4)သူ့နိုင်ငံမှပြည်ပအရင်းအနှီးများ၏၊ခိုင်မာမှုအတွက်စိုးရိမ်လာခြင်း၊ အားလုံးဟာသူ့အကျိုးအတွက် ပဲ ကြည့်ပြီးတစ်ဖက်သတ်ကြောက်လန့်နေတာထင်ရှားပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကြံ့ဖွတ်မှ ဌေးဦးနှင့်တရုတ်မှာပြောကြတာတွေမယ်၊တစ်ပါတီအာဏာရှင်တာကောင်းတယ်ဆို
လည်းဝင်စွက်ပြီး ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆို ဟင့်တွေပေးခဲ့တယ်၊(မော်နီတာဂျာနယ်၊ ဇွန်(2)ရက်ထုတ်၊အတွဲ
8 မှာ) သေချာလေ့လာကြပါ။ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေနဲ့ ဖန်တီးပြီး၊ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ဌေးဦးမှ မြန်မာပြည်
ပြည်ပအားကိုးပုစိန်ရိုးတဲ့ ၊ တရုတ်အားကိုးတော့——-ပေါ့။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်တို့အုပ်စုလျှောက်နေတဲ့လမ်းဖြောင့်ပေါ်မှ ဌေးဦးရဲ့ ကောက်ကွေ့ပြီး၊မြန်မာပြည်မှ
Comments By Postယုံလား? - မောင် ပေ - uncle gyiလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - မောင် ပေ - Mobile13အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - Ko chogyi - ခရီးသည်ကြီးအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - Ko chogyi - Mobile13မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TNA - မောင် ပေသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - TNA - နေ၀န်းနီရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - TNA - Mobile13bin bo..........(ဘင်ဘို) - TNA - အလင်း ဆက်ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - TNA - Mobile13Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - TNA - အရီးခင်လတ်မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ko pauk mandalay - ခရီးသည်ကြီးကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - TNA - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - ခရီးသည်ကြီး“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - မောင် ပေ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - မောင် ပေ - TheWinner Getprizeစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - Mobile13 - Ko chogyi``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - TheWinner Getprize - ခရီးသည်ကြီးကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - ဆူး - Foreign Residentကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - ခရီးသည်ကြီး - natureဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - သော်ဇင် (လွိုင်ကော်) - Mobile13နယ်မြေခံ စစ်တပ် ရဲ တို့ ငွေကြေး လာဘ်ယူကာ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ပစ်တော့မဲ့ ကုလားနဲ့ နွား သစ် မှောင်ခို ကိစ္စ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - ခရီးသည်ကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးမပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကလေး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - rain pricessကား ဒုက္ခ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13နံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဦးကြောင်ကြီးဘားလမ်းက ပြန်ဖို့ ဘက်စ်ကားခ မရှိတဲ့ နေ့က - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13တွံတေးအလှူ.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - kyaw hteikEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77790 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67215 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66706 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58371 Kyats )MaMa (57674 Kyats )Top Posts & Pagesအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ်